Enfuvirtide kushandiswa muhutachiona, dosage, side athari & yambiro - Shangke Chemical
1. Chii chinonzi Enfuvirtide?
2. Enfuvirtide mashandiro ekuita?
3. Enfuvirtide kushandiswa muhutachiona
4. Maitiro ekushandisa enfuvirtide poda?
6. Ndeipi mhedzisiro yemhiri enfuvirtide?
7. Ko enfuvirtide poda inofanira kuchengetwa sei?
8. Kuwedzera kutsvagisa uye kushandisa paEnfuvirtide poda
Enfuvirtide (159519-65-0) ndirwo rudzi rwepeptide inoshandiswa munyika yekurapa kudzivirira hutachiona hwehutachiona hwehutachiona (HIV) kubva mukutapukira maseru ako ane hutano ayo anogona kukwidziridza mhedzisiro yechirwere mumuviri wako. Enfuvirtide kana T-20 inotengeswa munzvimbo dzakasiyana dzepasi pasi pezita rechiratidzo Fuzeon. Nekudaro, zvichienderana nekwaunobva, iwe unogona kuwana iyo enfuvirtide iri kutengesa pasi peimwe zita rezita, asi ivo vese vanoshandira chinangwa chimwe chete.
Enfuvirtide poda (159519-65-0) inoshandiswa pamwe nemamwe mishonga yekurapa hutachiwana hwehutachiona, hutachiona hwehutachiona hwekuwanikwa immunodeficiency syndrome (AIDS). Iwe unofanirwa kucherechedzawo kuti Enfuvirtide hairape hutachiona hweHIV, asi inobatsira mukuderedza maitiro ayo nemhedzisiro mumuviri wako. Vanhu vari kutora chigadzirwa ichi vanotungamira hupenyu hwakanaka uye hune hutano sezvo masero avo akadzivirirwa kubva kuutachiona. Maererano nezvidzidzo, hutachiona hweHIV hutachiona hunopfekera maseru machena mumuviri wako anozvirwisa. Ndosaka, muzvizhinji, varwere veHIV / AIDS vanosangana neane low immune immune level. Nekudaro, Enfuvirtide inobatsira mukudzivirira maseru ako ane hutano kubva kune chero kukuvara, nekudaro ichiwedzera hutano hwako mamiriro.
Enfuvirtide acetate inoderedza huwandu hwehutachiona hwehutachiwana mumuviri wako, iyo inobatsira mukuwedzeredza immune system yako. Chigadzirwa chinobatsira iwe kudzikisa mikana yekuwana hutachiwana hwehutachiona hwakadai sekutapukirwa kunonyanya kurwisa varwere veHIV. Sezvo iwe paunotora imwe mishonga yeHIV / AIDS, inogara iri zano rakanaka kuvaperekedza neEnfuvirtide sezvo ichibatsira mushonga kuti ushande zvirinani uye uvandudze kushanda kwavo.
Enfuvirtide inowanikwa pamapuratifomu akasiyana asi inofanira kutengeswa pasi pemutemo wechiremba. Naizvozvo, usati watanga kutora chigadzirwa ichi, ita shuwa kuti uende kunoongororwa kuchipatara, uye unowana iwo dosi rakaringana kubva kuna chiremba wako. Enfuvirtide acetate inowanikwa online, uye iwe unogona kuita yako kuraira kubva mukunyaradza kweimba yako kana hofisi. Nekudaro, tsvaga kwakakodzera kuti unzwisise mugadziri uye mutengesi usati waita yako odhi. Mutengo we enfuvirtide unogona kuve wakasiyana zvichienderana nemutengesi. Pane akawanda ekunyepedzera ekurapa zvinhu pamusika zvinogona kukanganisa mamiriro ako. Kana iwe usina chokwadi nezve kuti unowana kupi mushonga, taura nachiremba wako kuti uwane rumwe rubatsiro.
Sezvambotaurwa kare, Enfuvirtide jekiseni mushonga unoshandiswa mukurapa kwehutachiona hwehutachiona hwehutachiona hwehutachiona (HIV). Hutachiona hahuri kukura kana kudzokorora pachako, uye nekudaro, inopinda maseru emuviri kuti ushandise metabolism yavo. Utachiona hweHIV hunowedzera kurwisa maseru immune system inozivikanwa seCD4 T-assist lymphocyte kana machena maseru eropa. Masero anoshanda nekurwisa chero hutachiona, kuyedza kupinda mu system yako yemuviri. Mukati mekudzokorora, hutachiona hunouraya CD4 T-rubatsiro maseru, uye nekudaro, muviri wako unoshaya simba, zvoita kuti usakwanisa kurwisa chero chirwere chinotevera. Izvi zvinoreva kuti uchatapukirwa nehurwere hwakawanda uhwo hwaunovhenekwa nekuti muviri wako haugone kurwisa.
Enfuvirtide meitiro ezviitiko inoona kuti ako CD4 maseru akachengetedzwa kubva mukupinda muHIV. Chigadzirwa chinosungirwa kumapuroteni akatenderedza hutachiona, anochabatsira kuzvibatanidza neCD4 masero. Kana iyo enfuvirtide ichibatanidzwa pamapuroteni aya, inodzivirira hutachiona hweHIV kusanganisa neCD4 cell membrane yako. Ziva kuti, hutachiona hweHIV hunogona kungozvinyandura uye nekuwedzera kana genetic yavo ichipinda mumasero emu CD4 Nekudaro, enfuvirtide inovimbisawo kuti hutachiona hahuri kubereka nekukura muhuwandu.
ichi Enfuvirtide mushini wekuita inosiyana nemimwe mishonga inorwisa-HIV pamusika, iyo chete inorwisa hutachiona mushure mekunge yabata masero eCD4 ako. Enfuvirtide HIV, nderimwe remishonga inorwisa hutachiwana uye inogona kushandiswa kurwisa kukura kwehutachiona kana ichinge yadzivirirwa nemimwe mishonga. Nekudaro, iwe unogona achiri kutora Enfuvirtide yega kana woita yako yekutanga sarudzo, uye ichaendesa izvo zvaunoda mhinduro. Parizvino, hapana kurapwa kweHIV kunozivikanwa, asi uine enfuvirtide, unogona kuve nechokwadi chekudzikisa huwandu hwehutachiona mumuviri wako nekudzora kufambira mberi kwechirwere chero chipi chinokonzerwa nekutapukirwa kweHIV / AIDS.
Nyanzvi dzinokurudzira kuti utore enfuvirtide poda pamwe nemamwe mishonga inopesana nehutachiona inorwisa hutachiona nenzira dzakasiyana. Kuwedzera peptide poda kurapwa iripo inogona kuve zano rakanaka, kunyanya kana hutachiona hwave kuramba nemishonga. Chigadzirwa ichi chinonzi chiri pakati pemishonga inorwisa-hutachiona hwehutachiona, uye yakarongedzwa zvakanyanya kune varwere vanga vachitora mimwe mishonga vasina kana kugadziriswa. Zvinogona zvakare kukurudzirwa kuvanhu vane kusashivirira kune mamwe mishonga inorwisa-hutachiona.
Fuzeon ine enfuvirtide puti sechinhu chinoshanda, chinoita kuti uve mushonga wakaringana wekurwisa hutachiona hweHIV mumuviri wako. Fuzeon ndeye weboka remishonga inozivikanwa seye fusion inhibitor. Mishonga inosangana muboka iri seFuzeon, inodzivirira hutachiona hweHIV kubva mukuputika nemasero eCD4 uye pakupedzisira inodzivirira kuti isabatanidzwazve uye iwedzere. Iyo peptide poda inoshandiswa pamwe chete nemamwe mishonga inorwisa-hutachiona hweHIV kuti uwane zvirinani. Sezvataurwa pamusoro, enfuvirtide inoshanda nekusunga nemapuroteni ayo anoita kuti zvive nyore kuti hutachiwana hweHIV huenderane neCD4.
Ichi chiitiko chinoita kuti zvisakwanisa kuita kuti hutachiona upinde mumasero machena eropa uye kukanganisa immune system yako. Muzviitiko zvakawanda, enfuvirtide acetate inorayirwa kuvanhu vanga vachitora mimwe mishonga, uye hutachiona hwatanga kurwisa mamwe mishonga yakatemwa. Taura nachiremba wako kuti uwane rumwe ruzivo nezve nzira yekunyatso kutora chigadzirwa ichi.
Usati watanga kunwa mushonga uyu, simbisa kuti unoverenga iyo yekurairetide mirayiridzo yekushandisa mune iyo pepa mukati mukati mekaki. Iwo marongero aya anokupa ruzivo rwakawanda rwekuti ungaitisa sei chigadzirwa. Vamwe Enfuvirtide vatengesi ichatokupa imwe yeiyo enfuvirtide side madhara kuti iwe ugone kuziva nguva yekusvika kuna chiremba wako. Ivo vanokupa iwe pamwe neye enfuvirtide yambiro yekuti iwe uve akachengeteka kana uchitora chinhu.
Enfuvirtide chigadzirwa jekiseni, zvakasiyana nemamwe mishonga inopesana nehutachiona iyo inotorwa nemuromo. Iyi peptide poda ine mamorekuru mahombe ayo anogona kupwanywa mukati momuviri wako system kana ikatorwa nemuromo otadza kuendesa zvido zvauri kuda. Kune peptide poda, ita shuwa kuti unowana gadziriro yacho chaipo kana kurega chiremba wako akuitira iwe. Nekudaro, chiremba wako anogona kukudzidzisa maitiro ekugadzirira iyo enfuvirtide poda nes solvent usati waendesa iyo enfuvirtide jekiseni.
Tevera matanho ese ekugadzirira zvakanyanya paunenge uchigadzirira iyo enfuvirtide poda. Iyo poda inofanira kusanganisa nemvura isina tsvina uye kuongorora mhinduro yacho kuitira kuti mhinduro igadzike zvakakwana isati yapa jekiseni.
Kutanga nekubvisa iyo flip-off cap kubva kune isina kunyorera mvura piritsi rejekiseni.
Nyorovesa vial yega yega neyakaora doro svutugadzike wobva waisiira iyo kwechinguva kuitira kuti matangi apuruke.
Shandisa iyo 3ML yakakura syringe uye kudhonza plunger kuti ingangosvika 1ml chiratidzo, wozoisa mweya mumvura isina kuchena vial zvishoma nezvishoma.
Zvino isa iserita syringe inaliti muvial kuburikidza neyekumisa simiti.
Pinza syringe nemvura isina kuchena muFuzeze vial pakona.
Tevere jekiseni mvura isina mbereko, uye itai kuti inodonha pasi zvishoma nezvishoma muPuzeon powder.
Usazungunuse vial asi shandisa yako chigunwe kuti utepure kwemasekondi gumi kuti inyungudike.
Kana ikatanga kunyungudika, isa parutivi kuti inyunguduke zvakakwana iyo inogona kutora maminitsi makumi mana.
Kana ichinge yasanganiswa zvakakwana, mhinduro yacho inofanira kunge isina mavara, yakajeka, pasina chero mabhuru, kana mhinduro yacho ikavezwa, ipe nguva yakawanda yekunyungudika usati wazvibaya wega. Kamwe mhinduro yacho yagadzika uye yakajeka iwe unogona ikozvino kuitisa dosage. Usatore dosage kana iwe ukaona chero masipi kana mhinduro isati yanyatsojeka.
Door yakajairika kune vakuru ndeye 90ml pazuva iyo inofanira kutorwa kaviri pazuva. Iyo jekiseni inofanira kupihwa paruoko rwako rwepamusoro kana chikamu chepamusoro chechidya chako. Kana iwe uri kupa chigadzirwa kumwana, chiremba wako anokuudza iwe chiyero chakakodzera uye kangani kuti utore jekiseni. Zvinokurudzirwa kutenderera nzvimbo dzejekiseni kuti uvape nguva yekupora. Zvakare, zivisa chiremba wako kana iwe uri kutora chero imwe mishonga yekurapa usati watanga kutora enfuvirtide.
Enfuvirtide inofanirwa kutorwa nemurwere weHIV / AIDS kuti asimbise immune system sezvo ichivharira hutachiona kubva mukusangana neCD4 cell pamwe nekuvadzivirira kubva pakudzokorora. Mushonga, zvisinei, wakasiyana kune vana nevakuru. Enfuvirtide synthesis inoita basa rakakosha mukurwisa hutachiona hweHIV hwakagadzira kuramba kwemimwe mishonga inorwisa HIV.
Inokurudzirwa enfuvirtide mukuru danho rehutachiwana iri 90mg pazuva rinofanira kukamurwa kuva maviri dosi. Iwe unofanirwa kubaya jekiseni nyangwe iri rakareba ruoko, ruoko rwemusoro kana mudumbu.
Piritsi yeanachiremba ane makore matanhatu kusvika gumi nematanhatu, is 6mg pa kg, uye dosage yacho inofanira kupihwa kaviri pazuva. Mwero wakanyanya wevana muzera rino bracket ndeye 16mg pazuva. Kune vana vemakore gumi nematanhatu uye nepamusoro piyero yakakurudzirwa ndeye 2 mg pazuva uye inofanirwawo kukamurwa mumaviri maviri pazuva.
Wakarasikirwa Enfuvirtide dosage?
Kana ukakanganwa kutora yako enfuvirtide hutachiona hweHIV, uitore nekukurumidza, iwe urangarira. Nekudaro, iwe unogona kusvetuka iyo kana iyo ingangove nguva yenguva yekutevera. Usashandise imwe yekuwedzera yekugadzirira yakarasika; zvinogona kutungamira mukukuvadza kwakanyanya. Zvakare, yeuka kuti utore wako wekutevera munguva munguva iyo mishonga isati yapera zvachose.
Kupfuura Enfuvirtide dosage?
Kana pane chero yakanyanyisa kutsvaga kurapwa pakarepo sezvo inogona kuendesa iwe kune yakaipa mhedzisiro.
Paunenge uchitora enfuvirtide acetate usingaise jekiseni padivi pebvi rako, zamu, mhemberero kana matete. Uyezve dzivirira kupinza jekiseni muzvikamu, mavanga, mabundu kana chero ganda rakange risina hutano. Kutora enfuvirtide hakuzvidzivirire kubva pakuparadzira chirwere, saka gara uine bonde, dzivirira kugovera zvinhu zvakapinza uye bhurosi rako rezino. Cherekedza ese mirayiridzo yemiyero kuti iwe unakirwe zvakanyanya. Kuti uwane rumwe ruzivo, taura nachiremba wako kuti akutungamirire munzira dzakasiyana dzekudzivirira kutapurirana kwehutachiona.
Enfuvirtide HIV kungofanana chero mumwe mushonga unogonawo kukufumura iwe kune zvakasiyana mhedzisiro zvichienderana nekuti mushonga uchaita sei nemuviri wako system. Dzimwe nguva mhedzisiro yemagadziro enfuvirtide inokonzerwa nekunyanyisa kana kushandiswa zvisizvo. Nekudaro, pane mamwe emigumisiro iyo inozivikanwa kune anenge ese ese enfuvirtide vashandisi. Kusachengetedza enfuvirtide kuchengetedza kunogona zvakare kukonzera kwakakomba mhedzisiro. Zvimwe zvezvakajairwa Enfuvirtide mativi inosanganisira;
Kusunungurwa kwekuda kudya, kushungurudzika, manyoka uye kupukunyuka
Marwadzo, kuzvimba kana kutsamwisa munzvimbo dzenjodzi
Kushaya simba kwemasumbu uye kurwadziwa
Tsvagira chiremba wako nekukurumidza iwewe unzwe zvinotevera zvakakomba mhedzisiro;
Kuzvimbirira kwakakomberedza mutsipa wako kana pahuro, kushaya simba kana kuchinja kwekuenda kumwedzi
Zviratidzo zvehutachiona hutsva senge kuzvimba gland, kuyerera kana kutonhora maronda.
Ropa mumuguta wako
Iyo enfuvirtide mhedzisiro inogona kusiyanisa kubva kune mumwe munhu kuenda kune imwe uye saka, usatore chero yavo. Dzidzisa chiremba wako kuti zvingaitika sei kuti mhedzisiro haiperi mushure menguva yakati. Kuti uve akachengeteka paunenge uchitora ichi chigadzirwa, cherekedza ese mirayiridzo mirayiridzo inopiwa nachiremba wako.
7. Enfuvirtide poda inofanira kuchengetwa sei?
Enfuvirtide poda (159519-65-0) Vagadziri vanogara vachiratidzira maitiro ekuchengetera chigadzirwa kana uchichiishandisa uye kunyangwe sei chekurasa. Iyo yakakurudzirwa isina unsixed enfuvirtide poda yekuchengetedza iri pamhepo tembiricha anenge 20 kusvika 25 degrees Celsius. Nekudaro, kana iwe usingakwanise kuchengeta pamhepo tembiricha, unogona kuichengeta yakachengetwa kusvika pamwero we2 kusvika ku8 degrees Celsius. Zvakare, chengetedza mvura isina kuchena pamhepo tembiricha nguva dzose.
Paunenge wasanganisa iyo enfuvirtide solution chengetedza mufiriji pa2 kusvika ku8 degrees Celsius. Musanganiswa enfuvirtide mhinduro inofanirwa kutorwa mukati memaawa makumi maviri nemana. Usashandise chinhu mushure mekunge chapera uye zvakare usazvitenga kana chisimbiso chekiti chakaputswa kana chisipo. Mushure mekushandisa enfuvirtide poda, tevera iyo FDA mirayiridzo pamaitiro aunoita kurasa kit uye mishonga isina kushandiswa.
8. Kuwedzera kutsvagisa uye kushandiswa pane Enfuvirtide poda
Paunenge uchitenga enfuvirtide poda kubva kune vakasiyana vatengesi, ita shuwa kuti iwe unotsvaga kwakaringana kuti uve nechokwadi chekuti unowana chigadzirwa chemhando icho chinokuvimbisa iwe mibairo inoshamisa. Kunyangwe iyo enfuvirtide zita zita Fuzeon iri rinozivikanwa mhando pamusika, iwe unogona zvakare kuwana chigadzirwa chiri kutengeswa pasi pezita rakasiyana zita. Kune vazhinji enfuvirtide vatengesi pamusika, uye iwe unofanirwa kugara uchienda kune zvakanakisa. The Enfuvirtide mitengo Inogona kusiyana kubva kune mumwe mutengesi kuenda kune mumwe, usaishandisa sechinhu chakakosha paunosarudza mutengesi chaiye.
Zvese mune zvese, pane kudikanwa kwedzidzo yezvokurapa uye tsvagiridzo yekuona kumwe kushandisa enfuvirtide nekushandiswa kwayo. Seyakagadzirwa jekiseni nguva dzose, vashandisi vazhinji vakasimudza zvinetsekana, uyezve kuenderera mberi kudzidza kunogona kubatsira mukukudziridza enfuvirtide dosage yemuromo. Neimwe nzira, chinhu chinogadzirwa chinogona kuvandudzwa kuwedzera kuti chibayirwe kamwe kana kaviri pamwedzi. Parizvino, iyo enfuvirtide inoramba iri mushonga unorwisa uye unokwanisa kurwisa HIV. Inzwa wakasununguka kutaura nachiremba wako nezve enfuvirtide uye gp41.
Zhu, X., Zhu, Y., Ye, S., Wang, Q., Xu, W., Su, S.,… & Zhang, T. (2015). Kuvandudzwa kwemishonga uye nekuumbwa kwezvakangoita zveHIV fusion inhibitor AP3 pamusoro enfuvirtide: inoratidza zvakanakira zano rekugadzira peptide. Mishumo yesainzi, 5, 13028.
Blanco, JL, & Martinez-Picado, J. (2012). Utachiona hwekubatanidza hutachiona hwevarwere vane ruzivo. Pfungwa dzazvino muHIV neAIDS, 7(5), 415-421.
Chowdhury, S., & Roy, PK (2016). Mathematics yekuenzanisira yeiyo enfuvirtide uye proteinase inhibitors sekusanganiswa kwehutachiona hwehutachiona. Yepasi Pese yeNhau Dzisiri dzeSainlinear neSainzi Simulation, 17(6), 259-275.